Indlu Enhle Ebanzi - I-Quetzaltenango Yomlando
Jabulela ubumfihlo bekhaya lonke. Ilungele iqembu labangu-8, amaqembu asebenzayo, imindeni, noma umuntu oyedwa.
Indlu Enhle - I-Quetzaltenango Yomlando
Ilungele iqembu, imindeni enezingane, noma umuntu oyedwa!!
Uma wena noma iqembu livakasha usuku noma inyanga, uzokhululeka kakhulu endlini yethu ehlome ngokuphelele eQuetzaltenango. Indlu yethu enamakamelo amane esimanjemanje, amabhavu amathathu kanye no-½ ene-cable TV. (Amanethiwekhi ase-US, kanye neziteshi zeSpanishi, nezinye izilimi), indawo yokupaka yangasese yemoto encane, ikhishi elihlome ngokuphelele elinendawo yokudla kwasekuseni, izindawo ezinkulu zokuhlala nezokudlela , ithala elinophahla lwelanga, nezingadi ezimbili zangaphakathi.
Isendaweni emaphakathi endaweni yeDemocracia, eduze kwazo zonke izinhlobo zezinto zokuhamba, okuhlanganisa neziteshi zamabhasi ezithuthela edolobheni laseGuatemala nanoma yimaphi amanye amadolobha. Iseduze nezindawo zokudlela, amakhefi e-inthanethi, izitolo ezinkulu zesimanje, izimakethe zabalimi, izikole zezilimi. Ikhaya lihamba imizuzu embalwa ukusuka endaweni yomlando yedolobha kanye nezintaba-mlilo zaseSanta Maria naseSantiaguito. Umakhelwane uphephe kakhulu!!
Usokhaya wethu onolwazi uzokwamukela futhi akuqondise nganoma yini ongase uyidinge kuhlanganise nokukutholela umshayeli wetekisi onokwethenjelwa, lapho ongaya khona ukuyothenga igrosa nokuthi ungathola kuphi ukudla eduze. Uzohlonipha nemfihlo yakho.
Uma ungakaze uye e-Guatemala, lesi isisekelo esifanelekile sokuhlola ubuhle baseGuatemala. I-Xela inezindawo ezinhle zempilo yasebusuku kanye neParque Central yomlando nezimpawu zomhlaba. IGuatemala City iqhele ngamakhilomitha angaba ngu-200 ukusuka eQuetzaltenango. Kunamabhasi amaningi aseduze azokusa e-Aguas Georginas, Laguna de Chicabal, Antigua, Atitlán, Chichicastenango, amabhishi aseduze, kanye ne-Xetulul ipaki lesithathu ngobukhulu e-Latin America.
Sazise ukuthi ungathanda ukuvakasha isikhathi esingakanani futhi singaqinisekisa ukuthi ikhaya lethu liphephile, liyimfihlo, lihlanzekile futhi lintofontofo kakhulu. Woza uzozizwela imfudumalo, umusa waseGuatemala wokungenisa izihambi.
4.88 ·175 okushiwo abanye
4.88 · 175 okushiwo abanye
Indlu yethu itholakala phakathi nebanga lokuya eCentral Park, ithule futhi isendaweni ephephile.
UMaria, umsizi wethu wasendlini uzokusiza. Kanye ngesonto, uzoqoqa udoti, ashintshe amalineni akho, futhi uzoqinisekisa ukuthi unakho konke ongase ukudinge. Ukuze uthole imali eyengeziwe angakusiza ukuwashela izingubo zakho.